လိင်တူချစ်သူများသည်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသလား။ | LGBT smear စမ်းသပ်မှု | Santotoro
လိင်တူချစ်သူတစ်ယောက်အနေဖြင့်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်လုံးဝကိုကျွန်ုပ်လုံးဝမပေးခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်သားအိမ်ခေါင်းပြforနာများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇအရကြိုတင်ခန့်မှန်းထားခြင်းကြောင့်၎င်းကိုသင်ရရှိမည်ဟုကျွန်ုပ်အမြဲယူဆခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏မိသားစု ၀ င်တစ် ဦး တစ်ယောက်မျှထိခိုက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ငါမကျင့်သောအချို့သောလူတို့၏ Dick နှင့်ထိတွေ့ပါ။ ” 30 နှစ်အရွယ်ဆိုဖီကပြောပါတယ်။
“ ငါဖိတ်ကြားခံရတဲ့အခါငါသွားတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသုံးနှစ်တစ်ကြိမ်ပဲ။ ငါအတိအကျသွားဖို့မကျေနပ်တာပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်တကယ်ရှိတယ်လို့ငါထင်တယ်၊ ငါတကယ်လျှောက်လှမ်းဖို့သိပ်မလိုအပ်ဘူး” “ ဒါဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အသံဖြစ်ပေမယ့်ကျွန်တော့်ကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့အချိန်နဲ့အရင်းအမြစ်တွေဖြုန်းတီးသလိုခံစားရတယ်။ “
သို့သော်အမှန်တကယ်တွင်ရောဘတ်စ်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း“ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရှိသူမည်သူမဆိုသင်၏လိင်မှုဆိုင်ရာ ဦး တည်ချက်သို့မဟုတ်ကျားမရေးရာလက္ခဏာများကိုမခွဲခြားဘဲစူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်၎င်းကိုထင်ဟပ်စေရန် NHS ၏လမ်းညွှန်ချက်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီ”
အားလုံးနီးပါးသောသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ (၉၉.၇ ရာခိုင်နှုန်း) သည်လူသားများ၏ Papillomavirus (HPV) ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အိတ်ခ်ျပီဗွီသည်အလွန်များသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတစ်ချိန်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ငါးယောက်အနက်လေးယောက်ကိုသက်ရောက်စေနိုင်သည်၊ ဖြစ်ရပ်အများစုတွင်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကကြာရှည်ပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲကုသနိုင်သည်။ ရှားရှားပါးပါးဖြစ်ရပ်များတွင်ဗိုင်းရပ်စ်ဆက်ရှိနေသေးလျှင်၎င်းသည်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ရပ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အစောပိုင်းကုသမှုမခံရလျှင်အလှည့်အနေဖြင့်ကင်ဆာသို့ကူးစက်နိုင်သည်။
လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သော HPV သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတစ်ဆင့်လွယ်ကူစွာကူးစက်နိုင်သော်လည်းခန္ဓာကိုယ်မှအရည်များမှကူးစက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ လက်နှင့်လက်ချောင်းများတွင်မိန်းမကိုယ်အရည်များလွှဲပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ကစားစရာများကိုဝေမျှခြင်းသည်သင့်အားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာရောဂါလက္ခဏာမပါဘဲဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုလည်းသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ယောက်ျားနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသောလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသမီးများနှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်စလုံးမှအမျိုးသမီးများသည်လည်း HPV မရှိဘဲ HPV နှင့်ထိတွေ့ခဲ့ရသည် သဘောပေါက်။
အမှန်မှာလေ့လာမှုများအရလိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုခံသောလိင်တူချစ်သူအမျိုးသမီး ၃ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအကြား HPV ရောဂါပိုးကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ လိင်တူချစ်သူအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသမီးများသည်လိင်အင်္ဂါအမျိုးသမီးများထက်လက်ရှိဆေးလိပ်သောက်သူများဖြစ်ရန်ပိုများသည်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအင်္ဂလန်၏အဆိုအရသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအတွက်နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကြောင့်မိခင်သို့မဟုတ်အစ်မဖြစ်ခြင်းသည်သင်၏အန္တရာယ်ကိုအနည်းငယ်တိုးစေသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာဒြပ်စင်တစ်ခုရှိ၊ မရှိသို့မဟုတ်အခြားရင်းနှီးသောမိသားစုဝင်များကဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်အခြားမိသားစု ၀ င်များကဆေးလိပ်သောက်ရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အချက်များရှိမရှိမသေချာပါ။
ငါတို့ရွေး လိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူအမျိုးသမီးတွေဟာ smear test လိုအပ်နေသေးလား။ အားလုံးကိုကြည့်ရန်
၃၉ နှစ်အရွယ်စာရာသည်မိန်းမနှစ်ယောက်နှင့်လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူသည်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာမှမကြာသေးမီကကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်သူမသည်များစွာသောအန္တရာယ်များထက်သူမအတွက်ပိုမိုသတိထားမိသည်။
“ ဒါ ထိုကဲ့သို့သော လိင်တူချစ်သူနှင့် bi အမျိုးသမီးများအတွက်အရေးပါသောဘာသာရပ်, သူမသည်အမျိုးသမီးဆရာဝန်တ ဦး ကကျွန်ုပ်အားအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ဆက်ဆံမှုရှိကြောင်းရှင်းပြသော်လည်း ‘အိုး၊ သီလရှင်များကသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာမဖြစ်စေရဘူး’ ဆိုတဲ့စကားကိုလိုချင်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့သည်။ အလေးအနက်ထား! “
အဆိုပါပြproblemနာသည် LGBT + အသိုင်းအဝိုင်းမှအခြားအဖွဲ့ဝင်များနှင့်လည်းပြန့်ပွားသည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီသောလိင်နှင့်အမျိုးသားများထက်ဝက်သည်သားအိမ်ခေါင်းရှိသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစစ်ဆေးမှုကိုတစ်ခါမျှမတက်ရောက်ခဲ့ပါ။ အထွေထွေအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားသော Trans အမျိုးသားများသည်သားအိမ်ခေါင်းစစ်ဆေးမှုကိုပုံမှန်ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသော်လည်း Public Health England မှအသက် ၂၅-၆၄ နှစ်အတွင်းရှိသည့်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရှိနေသေးသည့်မည်သည့်ယောက်ျားကိုမဆို smear ပြုလုပ်ရန်စဉ်းစားသင့်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
နားလည်နိုင်သည်မှာသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းသည်အထူးသဖြင့်ကျား၊ မခွဲစိတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူများအတွက်ဖြစ်သည်ဟု Jo’s Cervical Cancer Trust ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ရောဘတ်ဂီတကပြောကြားခဲ့သည် -“ ဒီစမ်းသပ်မှုရဲ့အရေးပါမှုနဲ့ပါတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေဟာအမျိုးသားတွေဆီရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်၊ တက်ရောက်ရန်။”
asexual ဖြစ်သော်လည်းအမျိုးသမီးများနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများရှိသည့် Ellie * အတွက်သူမ၏ smear စစ်ဆေးမှုများကိုမတက်ရောက်ရန်ရှုပ်ထွေးသောအကြောင်းပြချက်များရှိသည်။
သူမရှင်းပြသည်မှာသူမအနေဖြင့်လက်တွဲဖော်တစ်ယောက်၏ထိတွေ့မှုကိုမခံလိုခြင်းနှင့်မပတ်သက်ခြင်းရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်မသိသော်လည်းဆရာဝန်ကစစ်ဆေးခြင်းကိုစိတ်မ ၀ င်စားကြောင်းသူမကရှင်းပြသည်။ ရင်သားကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားကိုစစ်ဆေးခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်လည်းအလားတူခံစားမိသည်။
ဒီတော့ဖြေရှင်းနည်းများဘာတွေလဲ? “ လူတွေကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့စစ်ဆေးမှုကိုမတက်ရောက်တဲ့အတွက် LGBT အသိုင်းအဝိုင်းတွေကိုပါ ၀ င်ပြီးစိစစ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါ ၀ င်စေချင်တဲ့ဆန္ဒရှိလာတယ်” လို့ရောဘတ်ကပြောပါတယ်။
LGBT ၏ဝန်ထမ်းများအတွက်အသိပညာပေးသင်တန်းမှပစ်မှတ်ထားသည့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများအထိနှင့် LGBT အသိုင်းအဝိုင်းများအားတိုက်ရိုက်တက်ရောက်ရန်အရေးကြီးပုံကိုပြန်လည်ပြောပြရန်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းစာများတွင်အသုံးအနှုန်းအမျိုးမျိုးကိုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။
Ellie သည်မိတ်ဆက်လိုသောအခြားစိတ်ကူးတစ်ခုမှာသူနာပြုတစ် ဦး သို့မဟုတ်မိသားစုဆရာဝန်ထံမှနမူနာစာမေးပွဲကိုခံရပ်ရန်မလိုတော့ဘဲမိမိကိုယ်ကိုလေ့လာခြင်းအတွက်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Jo’s Cervical Cancer Trust ကဒီရွေးချယ်မှုကို NHS သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစစ်ဆေးမှုအစီအစဉ်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရှုမြင်ချင်ပါတယ်၊ ဂီတကထပ်ခါတလဲလဲရှုပ်ထွေးတဲ့တက်ရောက်သူတွေအတွက်တက်ရောက်နိုင်တဲ့အတားအဆီးတွေကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။
အသက် ၂၅ နှစ်မှ ၆၄ နှစ်အတွင်းရှိအမျိုးသမီးအားလုံးသည်သားအိမ်ခေါင်းစစ်ဆေးမှုအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီပြီးသုံးနှစ်မှငါးနှစ်တစ်ကြိမ် smear စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားခံရသည်။ ၎င်းတို့အားပုံမှန်ဖိတ်ကြားခြင်းမခံရသော်လည်း transoh အမျိုးသားများသည်သူတို့၏ GP ခွဲစိတ်မှုတွင် smear test သို့မဟုတ် Soho ရှိ 56 Dean Street ရှိ CliniQ ကဲ့သို့အထူးကုဆေးခန်းများသို့တောင်းဆိုနိုင်သည်။